ဒီတစ်ပတ် အတွင်း ဘယ်လို ထူးခြားမှု တွေက သင့် အတွက် စောင့် ကြို နေမလဲ…. – GaMone Media
Homepage / Knowledge / ဒီတစ်ပတ် အတွင်း ဘယ်လို ထူးခြားမှု တွေက သင့် အတွက် စောင့် ကြို နေမလဲ….
ဒီတစ်ပတ် အတွင်း ဘယ်လို ထူးခြားမှု တွေက သင့် အတွက် စောင့် ကြို နေမလဲ….
သင် လုပ်ဆောင်ရမယ့် တာဝန် အသစ်တစ်ရပ် ရှိတယ်။ သင့် ဘဝထဲကို ဝင်ရောက်လာမယ့် အချစ်မေတ္တာတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လက်ခံကြို ဆို ရ မယ်။
တစ်စုံတစ်ရာကို ဆုပ်ကိုင် ထားနေရတယ်ဆိုရင်လည်း ဒီအချိန်မှာ လွှတ်ချလိုက်ဖို့ သင့်နေပြီ။ သင့်အတွက် ပလန်အသစ်တွေက စောင့်နေ တယ် ။လက်တွဲဖော်မရှိတဲ့သူတွေ လက်တွဲဖော်ရှာတွေ့မယ်၊ သားသမီးလိုချင်နေတဲ့ သူတွေ သား၊ သမီးထွန်းကားမယ့် နိမိတ်တွေ ရှိတယ်။
သင့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကရရှိတဲ့ အသိပညာနဲ့ ရင်ဆိုင် စရာရှိတာ ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင်ဆိုင်ပါ။သင်က ကတိပေးပြီးသား ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သံသယတွေအကြောက်တရားတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ဖြေလျှော့ထားပါ၊ယုံကြည်ပါ။ဒီအချိန်က ဖန်တီးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ မှော်ဝင်နေတဲ့အ ချိန် လို ဖြစ်နေတယ်။ကိုယ့်ဆန္ဒတွေကြောင့် တစ်စုံတစ်ရာအပေါ် ထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲ အဲ့ဒီ့အစား ကိုယ့်ဘုံကိုယ့်နန်းကို အကောင်းဆုံးဖန်တီးလိုတဲ့ ဆန္ဒသာထား ရှိသင့်ပါတယ်။
သင္ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ တာဝန္ အသစ္တစ္ရပ္ ရွိတယ္။ သင့္ ဘဝထဲကို ဝင္ေရာက္လာမယ့္ အခ်စ္ေမတၱာေတြ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လက္ခံႀကိဳ ဆို ရ မယ္။
တစ္စုံတစ္ရာကို ဆုပ္ကိုင္ ထားေနရတယ္ဆိုရင္လည္း ဒီအခ်ိန္မွာ လႊတ္ခ်လိုက္ဖို႔ သင့္ေနၿပီ။ သင့္အတြက္ ပလန္အသစ္ေတြက ေစာင့္ေန တယ္ ။လက္တြဲေဖာ္မရွိတဲ့သူေတြ လက္တြဲေဖာ္ရွာေတြ႕မယ္၊ သားသမီးလိုခ်င္ေနတဲ့ သူေတြ သား၊ သမီးထြန္းကားမယ့္ နိမိတ္ေတြ ရွိတယ္။
သင့္ရဲ႕ အေတြ႕အႀကဳံေတြကရရွိတဲ့ အသိပညာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ စရာရွိတာ ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင္ဆိုင္ပါ။သင္က ကတိေပးၿပီးသား ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သံသယေတြအေၾကာက္တရားေတြ ျဖစ္ေပၚေနတယ္။ေျဖေလွ်ာ့ထားပါ၊ယုံၾကည္ပါ။ဒီအခ်ိန္က ဖန္တီးမႈေတြျပဳလုပ္ဖို႔ ေမွာ္ဝင္ေနတဲ့အ ခ်ိန္ လို ျဖစ္ေနတယ္။ကိုယ့္ဆႏၵေတြေၾကာင့္ တစ္စုံတစ္ရာအေပၚ ထိခိုက္မႈမရွိေစဘဲ အဲ့ဒီ့အစား ကိုယ့္ဘုံကိုယ့္နန္းကို အေကာင္းဆုံးဖန္တီးလိုတဲ့ ဆႏၵသာထား ရွိသင့္ပါတယ္။
Previous post ပဲခူးက ပြည်သူတွေ အတွက် ဘာမှ မလုပ်ပေး နိုင်လို့ ပြောစရာ စကားမရှိအောင်နာကျင်ရပြီး ဝမ်းနည်း ယူကြုံးမရစွာ တောင်းပန် လိုက်တဲ့ တိုင်ရွန်
Next post နေ့စဉ် ရက်ဆက် ထမင်းတောင် မစားနိုင်ဘဲ သားကို စိတ်ပူ နေ တဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ ကြောင့် စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေတဲ့ တိုင်ရွန်